Xiaomi Mi 9 wuxuu maraa tijaabada iska caabinta JerryRigEverything | Androidsis
Xiaomi Mi 9 wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
JerryRigDhammaan tijaabooyinka adkeysiga waxbadan ayaa caan ah maanta. Telefoonno badan ayaa isla mara, hadda noqoshada Xiaomi Mi 9. Dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha, taas oo soo muuqday bartamihii hore bisha Febraayo iyo in aad awoodid ka soo iibso Spain qiimo qaali ah. Qaabkan ayaa imminka maraya tijaabadan muhiimka ah.
Marka Xiaomi Mi 9 wuxuu marayaa tijaabooyinka caadiga ah ee isku mid ah. Markaad xoqdo shaashadda, dhinacyada iyo dareemayaasha, ilaa qaybta ugu dambeysa ee aad rabto inaad foorarsato taleefanka. Miyuu dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ka badbaadi doonaa tijaabooyinkan adag?
Shaashaddu waa wax aan ognahay inay si fiican telefoonka ugu qaban doonaan. Tan iyo Xiaomi Mi 9 tan ayaa leh difaacii ugu dambeeyay ee muraayadda Gorilla. Marka way adagtahay in si fudud loo xoqo. Intaa waxaa dheer, dareemayaasha ayaa sidoo kale la ilaaliyo. In kasta oo aysan ahayn sidii laga filaayay, maxaa yeelay wax walba iskama celiyaan.
Waxaad ka arki kartaa sida waxyeellada ka dhalanayso kamaradaha. Marka waa wax xisaabta lagu darsado imtixaanka. Ma ahan wax aad u weyn ama saameyn ku leh howlahooda, laakiin ilaalinta wanaagsan ee astaanta Shiinaha ayaa laga doorbidi lahaa arrintan. Sida gubashada shaashadda, waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi si loo muujiyo calaamadda. In kasta oo sumaddu hadhoow.
Ugu dambeyntiina, waxaan horeyba u soo gaarnay xilligii la duubmi lahaa Xiaomi Mi 9. Daqiiqad muhiim ah oo ka mid ah tijaabadan, oo aan ku arki karno dhammaadka dhamaadka dhammaadka dhib la'aan. Telefoonku ma leexdo ama ma jabomarkaa waxay ku sii jirtaa hal xabbad markasta. Waxay iska caabineysaa qeybtaan ka mid ah imtixaanka.
Xiaomi Mi 9 ayaa ka gudubta baaritaanka JerryRigEverything. Waxaan arki karnaa in guud ahaan heerkan-sare uu yahay tusaale si fiican u caabiya. War wanaagsan ayaa u ah kuwa horey u soo iibsaday moodelkan cusub ee sumadda Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi 9 wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Google Fit wuxuu noqon doonaa saaxiibka ugu fiican batterigaaga casriga ah
Vsmart wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo galo Spain bishaan